Dabka ayaa la sheegay in markii hore uu ka kacay maqaaxi laga shaaheeyo oo ku dhawayd suuqa shidaalka, waxaana la sheegay in uu ku faafay bakhaaradii Keydka shidaalka, taasoo keentay in uu dabku siweyn ugu baaho suuqa.
Goobjooge ku sugan goobta uu dabka ka kacay ayaa HOL u sheegay in dabku yahay mid xooggan, wuxuuna sheegay in mid kamid ah bakhaaraha shidaalka uu gabi ahaanba basbeelay.
Goobta uu dabka ka kacay ayaa waxa ku sugan masuuliyiin katirsan maamulka Al-shabaab ee magaalada Kismaayo, waxaana socdo dadaallo xooggan oo lagu doonayo in lagu damiyo dabka xooggan ee ka kacay suuqa.
Gubashada hantida dadweeynaha ka sokow ma jirto cid kale oo ku waxyeeloowday dabka ka kacay suuqa weyn ee shidaalka ee loo yaqaan Umbultooriyo.
Dhinaca kale war goordhawayd naga soo gaaray galbeedka gobolka jubada Hoose ayaa sheegay in uu markale dagaal xooggan ka qarxay nawaaxiga deegaanka Birta Dheer halkaas oo 24-kii saac ee ugu danbeeyay ay ka taagnaayeen xiisado dagaal oo u dhexeeya ciidamada dowladda, kuwa Raaskaambooni iyo Militariga Kenya oo isku dhinac ah iyo Xarakada Al-shabaab.
9/16/2012 5:28 AM EST